Archive du 20181212
Diniky ny Samy Malagasy Manohana ny Kandida laharana faha 25
Taorian’ny AG “Fivoriambe” nataon’izy tamin’ny faran’ny volana novambra 2018 teo dia nanapakevitra ny fikambanana DSM “Diniky ny Samy Malagasy” noforonin’ny Pr Paul Rajaonarivelo fony fahavelony ary
Efa lehibe izahay tamin’ireny !
Mazava aminao tsara angamba izay ry Jean fa tsy azonao ampatoriana am-pitsanganana toy ny taloha intsony ny bandy aa ! Mahalala lavitra ny fomban-drazany mihoatra anao izy.
Lainga sy lohamboto foana ve e!!!?
Herinandro sisa dia higadona ilay andron’ny 19 desambra, kihon-dalana lehibe ho an’ny tantaram-pirenena.
Fampananana asa eto Madagasikara Mbola lavitry ny afo ny kitay
Nanao jery todika momban’ny politika nasionalin’ny fampananana asa sy fampiofanana arakasa tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ireo mpisehatra ao amin’izany ao amin’ny Ministera omaly 11 desambra.
Manomboka mazava ny antony tsy mety mahatontosa hatramin’ny farany ny fanadihadiana momba ny kidnapping eto amintsika.
Sarotra ho an’ny kandida laharana faha 25, Marc Ravalomanana, ny tsy ho lasa filoham-pirenena raha ny fanambaram-panohanana sesilany voarainy hatramin’ny omaly ary inoana fa hitohy anio sy mandra-pahatongan’ny 19 desambra.
Ankatso Nesorina avokoa ireo tany ahiana hihotsaka
Vonona hiatrika ny fotoam-pahavaratra ireo mponina ao anatin’ny Boriborintany faharoa, kaominina Antananarivo Renivohitra.
Tetibola hiatrehana ny fety 50.000 Ar ny farany ambony ho ana tokantrano maro
Roa herinandro latsaka sisa dia higadona ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona.
Fankalazana ny fetin’ny noely Ankizy kamboty sy sahirana miisa 4.200 nahazo fanampiana
Herinandro vitsy sisa dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Noely isika.
Tetibolam-panjakana 2019 Tsy lany teny amin’ny antenimierandoholona
Tsy mifanaraka amin`ny andininy faha-92 voalaza ao anatin`ny lalàm-panorenana ny fanitsiana nentina tamin`ny tetibolam-panjakana lasitra (LFI) fa tokony hatao mifanaraka amin`ny fampidiram-bola ny fandaniam-bola nokitihan`ny solombavambahoaka,
Lalàna amin’ny ady amin’ny famotsiam-bola Hamotika ny toekarena raha sanatria tsy lany eo
Fotoana natokana hanamafisana sy hankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny ady amin’ny kolikoly ny omaly talata 11 desambra.